MAI မြန်မာ့ လေကြောင်း မှ လှိုက်လဲစွာ ကြိုဆိုပါတယ်… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » MAI မြန်မာ့ လေကြောင်း မှ လှိုက်လဲစွာ ကြိုဆိုပါတယ်…
Posted by CharTooLan on Sep 10, 2010 in Aha! Jokes, Satire |7comments
မင်္ဂလာ ရှိသော မနက်ခင်းပါ၊ မြန်မာ့ နိုင်ငံတကာ လေကြောင်းမှ ထိုင်နေသာ
ခရီးသည်များနှင့် မတ်တက်စီးနင်း လိုက်ပါလာသော ခရီးသည်များကို
နှုတ်ခွန်းဆက်သပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ လေယဉ်မှူး သူရိန် ဖြစ်ပါတယ်။
လူကြီးမင်းများအားလုံး ကိုယ့်ထိုင်ခုံ တွင် ထိုင်ကြရန် နှင့်
မတ်တက်ရပ်သူများ သေချာ မတ်တက် ရပ်ကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်။ မြန်မာ့
လေကြောင်း မှ ခရီးစဉ်အချိန် ၄ရက် နောက်ကျသွားခြင်းကြောင့် ၀မ်းနည်းပါတယ်။
ရာသီဥတု မကောင်းတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ Flight 747 စင်္ကာပူ မှ
မြန်မာပြည် ကို ပျံသန်း နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ လေယာဉ် ဘယ်နား
ရပ်နားမယ်ဆိုတာတော့ ပြောလို့ မရပေမဲ့ မြန်မာပြည် တစ်နေရာရာမှာ
ရပ်နားမှာတော့ ကြိမ်းသေပါတယ်။ ကံကောင်းရင် လူကြီးမင်းတို့ နေတဲ့ ရပ်ကွက်မှာ
ပျံသန်းနေတာကြာပါပြီ၊ ဘယ်လောက် အန္တရာယ် ကင်းသလဲဆိုရင် အကြမ်းဖက် သူတွေတောင်
ကြောက်ပြီးမစီးကြပါဘူး။ သတင်းကောင်းပါး လိုက်တာကတော့ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ခရီးသည် ၃၀%
ဟာ သူတို့ သွားလိုတဲ့ ခရီးကို မြန်မာ့လေကြောင်း ပို့ဆောင်မှုကြောင့်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ခရီးသည်များ တောင်းဆိုချက်အရ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လေယာဉ်ပန်ကာ အင်ဂျင်ဟာ နားငြီးတယ် ဆိုရင် ပိတ်ပေးလို့ရပါတယ်။တကယ်ဘုရားတရားမကိုင်းရှိုင်းသူများ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ In Flight ရုပ်ရှင်ကတော့ တီဗီက ပြသနေတာတွေကို ကူးယူဘို့
မေ့သွားလို့ ကြည့်ရှုလို့ မရပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ နဲ့ အမြင့်ချိန်တူ ဘေး
မနီးမလှမ်းမှာ ပျံသန်း နေတဲ့ Emirate
Airline မှာ ပြသ နေတဲ့ ရုပ်ရှင်ကို ညာဘက်က ပြုတင်းပေါက်တွေကနေ
လှမ်းကြည့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ လေကြောင်းအားလုံးတွင်
ဆေးလိပ် မသောက်ကြရန် နှင့် မီးခိုးငွေ့တွေ့ပါက ကျွန်တောတို့ တပ်ဆင်ထားတဲ့
အင်ဂျင်စက် က အရှိန်လျှော့ရန် အချက်ပြသနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
လေကြောင်းဟာ မကြာခင်မှာ ဆင်းသက်တော့မှာမို့ ခါးပတ်များ ပတ်ထားကြရန်နှင့်
ခါးပတ် ရှာမရသူများ ၊ ကိုယ့်ခါးမှာ ပါလာတဲ့ ခါးပတ်ကို ထိုင်ခုံနှင့်
တဆင့် ရောင်းချပေးနေပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ မီးပျက်တာရယ်၊ အင်တာနက် ဆာဗာ များ
လေးလံတာရယ်၊ ကမ္ဘာ့သုံး ငွေကြေးကဒ် စနစ်မရှိသေးသောကြောင့်
ဒါမျိုးက ဟာသမလုပ်သင့်တဲ့ အရာပါ။ ကိုယ့်မြန်မာလေကြောင်းကို တမင်သတ်သတ်ကိုပုတ်ခတ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးဖြစ်လို့ ရှုံ့ချပါတယ်။
၃။မြန်မာတွေ သိပ်ညံ့တယ်ထင်နေရင် မြန်မာပျောက်တော့မယ်
၆။အချိန်အမှန်ဆုံး (ကမ္ဘာမှာ) မြန်မာအဲဝေး ကရခဲ့တာကောသိပါသလား
ရ။လေယဉ်မှာ flight plan နဲ့ ETA , ETD ပေးရတာသိပါသလား
(၂၀၁၀ ကတင်တဲ့ ပို့စ် ကို အခု မှ ချိတ်ချိုး နေရသေး )
တကယ်ဆိုလဲ ၂၀၁၀ အရင်က ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့
အခု ၂၀၁၂ မှာ ကမ္ဘာမှာ မြန်မာလေကြောင်းလိုင်းတွေက အကောင်းဆုံး ဖြစ်နေပြီပေါ့ ဗျာ
ကိုမိုးတိမ် ပြောတဲ့ ETA , ETD တို့ ဆိုတာ ဘာတွေလဲဗျ
လေသူရဲ ကြီးဆိုတော့ အတွေ့အကြုံလေးတွေ ရေးပြပါလား စိတ်ဝင်စားဘို့ ကောင်းမှာ ဗျ
တရွာလုံးကိုယ်စား တောင်းဆိုပါတယ် ဗျာ
Estimate Time Arrival (ETA) နဲ့ Estimate Time Departure (ETD) ပါဗျာ။
လေယဉ်ရောက်မယ့်အချိန် နဲ့ လေယဉ်ထွက်ခွာပျံသန်းချိန်ကို အတိအကျသတင်းပေးရပါတယ်။
လေယဉ်သွားမယ့်လမ်းကြောင်း(flight plan)ကို အနဲဆုံး ၄၅ မိနစ်ကြိုတင်သတင်းပေးရပါတယ်။
လေယဉ်ဟာ ဘတ်(စ်)ကားမဟုတ်ပါဘူး။Airspeed (အမြန်နှုန်း)အတိအကျထိန်းရပါတယ်။
အားလုံးအတိအကျတွက်ပြီးမှ သွားရတာပါ။လေယဉ်စီးတဲ့သူတိုင်း ဘယ်အချိန်ရောက်မယ်ဆိုတာကို
ကြိုတင်အသိပေးပါတယ်။ပို၊လို (၅)မိနစ်ဆိုတာ အလွန်ဆုံးပါ။ရာသီဥတုကောင်းရင် အတိအကျကို
ရောက်ပါတယ်။GPS နဲ့ flying facility တွေအများကြီးရှိနေပါပြီခင်ဗျာ။
စါရေးသူဟာ ဟာသဥဏ် ကောင်းပါတယ် ပါရမီရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ အမ်အေအိုင် ကိုတော့
လေသူရဲကြီး ကလဲ …
ကျနော် ကြုံခဲ့တာတစ်ခု ကတော့ ဗန်းမော်မြို့ ကနေ မန်းလေး ကို တိုက်ရိုက်ပျံသန်း မယ့် လေယာဉ် ခရီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဗန်မော်
လေယာဉ်ကွင်းမှာ ပစ္စည်းတွေ စစ်ပေါင်ချိန် အားလုံး ပြီးစီးလို့ လေယာဉ်ပေါ်တတ်ဖို့ ဘဲကျန်တော့ တဲ့ အချိန်မှာ လေယာဉ်က
ပန်ကာ အဆင်မပြေလို့ ခရီးစဉ်ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ပါတယ်..အဲ့ဒါနဲ့ လေယာဉ်ကွင်း အစီအစဉ်ကားနဲ့ ဗန်းမော် မြို့ ထဲက တည်းခိုခန်း
မှာ တစ်ညတာ အိပ်စက်ပြီး နောက်နေ့ ခရီးစဉ် ကတော့ အဆင်ပြေစွာနဲ့ လေယာဉ်ပျံသန်းမှု့ စတင်ပါတယ် ..လေယာဉ်ပေါ်တတ်ခါနီး
မေ့ပြီး အပေါ့အပါးမသွားခဲ့ မိတော့ လေယာဉ်ပေါ်ရောက်မှ အပေါ့ သွားချင်လို့ မတ်တပ်ရပ်ပြီး လေယာဉ်နောက်ဖက် က အိမ်သာ ရှိ
ရာသွားမယ် ပြင်တော့ လေယာဉ်မယ်လေးက ဘယ်ကိုသွားမလို့ ပါလဲ လို့ လာမေးပါတယ် ..အဲ့ဒါနဲ့ အပေါ့သွာချင်ကြောင်းပြောတော့
လေယာဉ်မယ်က ခဏလေး စောင့်ပေးပါ..တဲ့ .သူကတော့နောက်ဖက်ကိုသွားပြီးအလုပ်တွေ ရူပ်ပါတော့တယ်..ဘာများလဲလို့ ကြည့်
လိုက်တော့ အိမ်သာထဲမှာ ပါ ပစ္စည်းတွေ ကထည့်လာတာကိုး ဟိဟိ အဲ့ပစ္စည်းတွေ သယ်ထုတ် ပြီး ရှင်းနေရပါတယ်..ပါဆယ် ထုပ်တွေပေါ့..ပြီးတော့မှ အိမ်သာထဲ ၀င် အပေါ့အပါးသွား..လေယာဉ်ပျံသန်းတာကတော့ ပုံမှန်ပါဘဲ လမ်းမပေါ်မှာ လေယာဉ်ပြေးတာ
တစ်ချက်ဘဲ လမ်းတွေက သိပ်မကောင်းတော့ ကတုန်ကယင်ကြီးဗျာ..မြန်မာလေကြောင်းလိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ..တကယ်ကို ကိုယ်တွေ့ ကြုံခဲ့ ရတာလေးပါ.. တာချီလိပ်ဘက်က ပြန်လာတော့ မှတ်သားထားတာလေး နဲ့ အရင်ဆုံး အိမ်သာ ၀င် ကိစ္စလေးတွေ
အရင် ရှင်းပြိးမှ စိးခဲ့ ပါတယ်..အဲ့ကျပြန်တော့ ဟဲဟိုးဆိုက်တယ်.ပြိးတော့ ခရီးသည်ထပ်တင်တယ် ချတယ်..ပြီးတော့ မန်းလေး..ပြီးမှ ရန်ကုန်..အဲ့လို.ပေါ့ဗျာ အဆင်ပြေပါတယ်..ကြားလေဆိပ်ကလမ်းတွေကတော့.သိပ်မကောင်းလို့ ခုန်ဆွခုန်ဆွပါဘဲ..ဟိဟိ..